Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas oo difaacay Mashruuca Dekedda Boosaaso ee DP World[Video] | SAHAN ONLINE
BOOSAASO – Madaxweynaha Puntland Dr Cabdiweli Cali Gaas ayaa si weyn u difaacey heshiiska uu la galay shirkadda DP Woprld ee laga lee yahay dalka Imaaraadka Carabta taas oo muddo 30 sano ah la wareegeysa Dekadda Bosaso isla markaana gelineysa boqolaal Malyuun oo Dollar oo lagu hormarinaayo dekadda.
Madaxweynaha Puntland oo waraysi gaar ah siiyey Telefishanka SBC ayaa sheegay in dekadda Bosaso ay tahay dhaxalkii Dowladdii hore, muddo dheer aysan helin wax dayactir ah, ayna u qaab ekeyd dekad Kaluumeysi maadaama aysan lahayn dhamaan agabkii dekad u baahneyd, haddii aan hadda wax laga qabana xaaladeedu ay noqoneyso mid sii xumaata.
350milyan oo dollar cidda Soomaaliya ku aamineysa in ay ku maalgashato yey tahay, waxaan aaminsanhaya waa nasiib u soo hoydey Puntland, waa nasiib u soo hoydey ummadda Soomaaliyeed, haddii laga faa’ideysan waayo waa laga shaleyn doonaa.
Cabdiweli Cali Gaas
Cabdiweli Cali Gaas ayaa sheegey in muddo 30 sano ah ay tahay wax aad u yar marka la eego dhaqaalaha shirkaddu ku maalgelineyso, ayna habboon tahay in Ilaah lagu mahadiyo, waxaa kale oo uu hoosta ka xariiqey in nidaamka canshuuraha aysan waxba iska beddeleyn shirkadduna xaq u yeelanayso khidimaadka iyo adeega dekadda.
Dr Cabdiweli Cali Gaas ayaa sheegay in aysan jirin guryo la duminaayo, iyo qorshe lagu duminaayo. ganacsato badan iyo dadka aqoonta u leh arrimaha dekadaha ayaa sheegaya in haddii dekadda Bosaso la hormarinaayo ay khasab tahay in la dumiyo dhulka ka hooseeya Dowladda Hoose ee Bosaso, haddii kale aysan noqoneyn dekad la ballaariyey oo la hormariyey.
Madaxweynuhu kama hadlin waxa heshiiskan burin kara, haddii shirkaddu ka soo bixi weydo ballan qaadkii iyo heshiiskii waxa dhacaya.
Odoyaal iyo waxgarad kale oo dhawaan Bosaso ka soo saarey baaq ay ku sheegayaan in DP World ay dhisato dekad cusub ee aysan la wareegin tii Talyaanigu u dhisey ayuu Madaxweynuhu ku tilmaamey kuwo aan bulshada metelin, ee aan odoyaalba ahayn, waxaana uu yiri dad jiraba maaha.
Maalinta Axadda ah ayaa si rasmi ah loo daahfurayaa mashruucan.
Waxyaabaha kale ee Madaxweynuhu ka ahdley waxaa kamid ah
Dhibaatada lacagta shiling Soomaaliga
Xiisadda siyaasadeed ee Galmudug
Sarkaalkii ONLF ee loo dhiibey Itoobiya
iyo qodobo kale oo xiiso badan